Tahiry isam-bolana Aogositra 2015 1 Lahatsoratra Marsa 2013 2 Lahatsoratra
Aogositra 2011 1 Lahatsoratra Jona 2011 1 Lahatsoratra Mey 2011 1 Lahatsoratra Febroary 2011 1 Lahatsoratra Aogositra 2010 1 Lahatsoratra Jolay 2010 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Slovaky	14 ora izay Mety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google Mpanoratra Subhashish Panigrahi · Azia Atsimo 04 Aogositra 2011 Slovakia: Vola Be Azo Avy Amin'ny Hira Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Jona 2011 Slovakia, Polonina: (Tsy) Fahafantarana ny Traikefa Mikasika ny Euro Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Tantara Malaza Indrindra Manerantany 04 Janoary 2015JamaikaAo Jamaika: Afaka Manao Izay Hanaitaitra Ve No Sady Hitàna Biraom-panjakàna Ny Vehivavy?
Tantara mikasika ny Slovaky 08 Marsa 2013
Kianja Sa Sekoly: Diso Toerana Ny Laharam-Pahamehana Ao Slovakia Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Tsy misy vola ampy hanomezana karama sahazo ho an'ireo Slovaky mpampianatra, saingy misy kosa ny vola hananganana kianja filalaovana baolina kitra manerana ny firenena. Tibor Blazko mitatitra momba ny hadisoan'ny governemanta Slovaky amin'ny laharam-pahamehana amin'ny famatsiam-bola.
Slovakia: Mamelona Adihevitra Ilay Fihaonambe “Mitady Fiainana Mendrika sy Azo Antoka” Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Nanodidina ny 3000 ireo olona tafahaona “ho amin'ny zon’ny vahoaka mendrika” tao an-tananan’ny Partizanske, tamin'ny Septambra. Tamin’ity volana ity, ny 13 Oktobra kosa, olona nihoatra ny zato no tafahaona tahaka izany – “hiaraka ho amin’ny fiainana mendrika sy azo antoka” – tao an-drenivohitr'i Slovakia tao Bratislava (horonantsary). Niaraha-nanomana tamin’i Oskar Dobrovodský ...
Slovakia: Fampitahana Ny Vola Miditra Amin'ny Mpifanolo-bodirindrina Roma Sy Ny Tsy Roma Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Adikan'i Tibor Blazko ireo fanadihadian'ny mpampiasa aterineto mikasika ireo olana sasany asongadin'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny tatitra nataony vao haingana : ny tsy an'asa,ny haraton'aina, ny lavaka amin'ny vola miditra eo amin'ny fianakaviana Roma sy ny tsy Roma any slovakia
Slovakia: Olana Momba Ny “Asa sa Vola” Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Tany atsinanan'i Slovakia, niangaviana hiditra amin'ny tetikasam-panjakana iarovana amin'ny tondra-drano ny tsy an'asa. Ao amin'io faritra manana taha ambony amin'ny tsy fananan'asa io dia efatra monja ny tovolahy nanaiky. Nandà avokoa ny hafa rehetra, nanambara fa mbola mahantra kokoa ry zareo raha mandray io asa io. Manoratra momba ny tsy... 09 Janoary 2012
Slovakia: Hetsi-panoheran'ny Mpitsabo Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Iray amin'ireo hetsika Slovaky isan'ny nanana ny lanjany tokoa tamin'ny 2011 ny hetsi-panoherana nataon'ireo mpitsabo maherin'ny 2000 avy amin'ny toeram-pitsaboana an'ny fanjakana ; 1.200 tamin'izy ireo (avy amin'ny efa ho 6.500) no nampiato vonjimaika ny fifanarahan'asan-dry zareo toarian'izay. Tibor Blazko no manazava ny toe-draharaha sy mandika ny fomba fijerin'ny vahoaka... 13 Mey 2011
Slovakia: Mpanjifa Kilasy Faharoa Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Na dia mety hiandrandra vokatra avy amin'ny karazana iray hitovy kalitao manerantany aza ny mpanjifa, misy foana ny fahasamihafàna isam-paritra eo amin'ny kalitao sy ny vidiny, miankina amin'ny hoe novokarina ho an'ny mpanjifa ao Eraopa Andrefana na ho an'ireo any Eraopa Afovoany sy Atsinanana. Tibor Blazko mitatitra ireo fanehoankevitra avy... 22 Febroary 2011
Haiti: Fanampiana avy any Slovakia notazonin'ny ladoany mandritra ny folo volana Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Kontenera miaraka amin'ny sambo faharoa misy ny fanampiana ara-olombelona avy any Slovakia no notazon'ny ladoany any Haiti efa ho folo volana. Mandika ny fomba fijerin'ny mponina amin'ny aterineto Slovaky ny olana i Tibor Blazko.
Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao an-tserasera tahaka ny TV Cablée ve? Mpanoratra Tibor Blazko · Slovakia Miova tokoa ny andro. Eny fa na any Shina aza ankehitriny nisy ny olona, taona vitsivitsy lasa izay, no nihomehy raha nilazana fa handoavam-bola ny mankany an-trano fidiovana, ary, iza no mahalala, fa angamba heverin'ny taranaka manaraka fa tsy iadian-kevitra izany mandoa vola ijerem-baovao amin'ny aterineto izany. Mety ho efa...
Slovakia: Ireo fitsangatsanganan-tsekoly Hongroazy Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana Mampifandray ny fihetsik'ireo Slovaky mponin'ny aterineto amin'ny lalàna Hongroa vaovao izay mety hitondra ireo ankizy mpianatra Hongroa any amin'ireo firenena mpiray vody rindrina any Hongrie teo aloha i Tibor Blazko .